Massage Kugeza Turu Vagadziri & Vatengesi | China Massage Kugeza Turu Fekitori
Katsi Bvudzi Remover Brush
1.This katsi bvudzi rinobvisa bhurashi rinobvisa rakafa bvudzi kusununguka uye kurasira bvudzi rezvipfuyo kunochengeta chipfuwo chako chakashambidzika zvakanaka.
2.Iyo bvudzi rekubvisa bvudzi rakagadzirwa nerabhora rakapfava rine diki dhizaini dhizaini, uchishandisa iyo electrostatic musimboti wekupinza bvudzi.
3.Iyo inogona kushandiswa kukwiza mhuka dzako dzinovaraidza uye dzinovaraidza zvinotanga kuzorora pasi pekufamba kwekati bvudzi rinobvisa bhurashi.
4.Ibrashi inokodzera saizi dzese dzembwa nekatsi. Icho chipfuyo chinopa zvirinyore uye chiri nyore kushandisa, chengetedza imba yako yakachena uye chipfuwo chine hutano.
Imbwa Kugeza Massage Brashi
Imbwa Kugeza Massage Brashi ine yakapfava rabha pini, inogona ipapo kukwezva yakasununguka uye inodurura hura kubva kune yako chipfeko chejasi apo chipfuwo chako chiri kukwizwa kana kugezwa. Inoshanda kwazvo pambwa nekatsi neese saizi uye mhando dzebvudzi!
Rubberized nyaradzo yekubata matipi parutivi rwembwa yekugezesa masaji bhurashi inokupa iwe kutonga kukuru kunyangwe kana brashe yakanyorova.brashi rinogona kubatsira kubvisa tangles uye kupopota kweganda rakafa, zvichiita kuti jasi rive rakachena uye riine hutano.
Mushure mekutsvaira chipfuwo chako, ingo pukuta imbwa iyi yekugeza massage brashi nemvura. Ipapo yakagadzirira kunotevera nguva yekushandisa.
Imbwa Shampoo Kushambidza Brashi
1.Iyi Imbwa Shampoo yekushambadzira Brush iri nyore kwazvo kubata uye yakakodzera kune varidzi vanopa yekugezesa kune dzinovaraidza vega.
2.Iyi imbwa yekugeza shambuu yekushambidza ine bristles nyoro, haizokuvadze iyo fur uye ganda uye iwe unogona kubvisa yako dzinovaraidza bvudzi rakadururwa nyore.
3.Nediki denderedzwa chengetedzo, haufanire kutambanudzira ruoko kune sipo uye nesipo uchigeza chako chipfuwo. Iri brashi rinogona kushandiswa kutora bhati uye zvakare kukwiza imbwa.
4.Kungotsvaira chipfuwo chako zvishoma, iyi shampoo yekushambidza bhurashi inogona kuita fuma yakapfuma kurega imbwa ichiva yakachena kupfuura mamwe mabhurasho akajairika.
Imbwa Bhati Shower Brush
1. Iri rinorema-basa imbwa yekugezera bhurasho rinobvisa nyore bvudzi rakasununguka uye lint pasina kubata matangi uye zvichikonzera kusagadzikana kune imbwa yako. Iyo inochinjika yerabha bristles inoshanda semagineti kune tsvina, guruva, uye rakasununguka bvudzi.
2. Iyi imbwa yekugezesa bhurasho rine zino rakatenderedzwa, Harikuvadze imbwa ganda.
3. Imbwa Yekugeza Shower Brush inogona kushandiswa kukwiza mhuka dzako dzinovaraidza, uye mhuka dzinovaraidza dzinotanga kuzorora pasi pekufamba kwebrashi.
4. Iyo nyowani isiri-inotsvedza inobata parutivi, unogona kusimbisa kubata kana iwe uchikwiza imbwa yako, kunyangwe mubhavhu.
Imbwa Shamba Shower Sprayer
Iyi imbwa inoshambidza yekugezera inosanganisa bhurashi rekugezera uye mvura inosasa mvura.Haisi chete inogona kutora shawa yechipfuwo, asiwo massage.Iyo sekupa imbwa yako mini spa chiitiko.
2.Professional imbwa yekugeza shawa sprayer, yakasarudzika yakakomberedzwa chimiro yakagadzirirwa kugeza imbwa dzese saizi uye mhando.
3.Two bvisika faucet adapta, gadza uye bvisa zviri nyore mukati kana kunze.
4.Imbwa yekugeza shawa sprayer inoderedza zvakanyanya mvura uye sipo yekushandisa kana ichienzaniswa neyechinyakare yekugeza nzira.
Pet Bvudzi Kuchenesa Kugeza Uye Massage Brush
1.Pet Bvudzi Kuchenesa Kugeza Uye Massage Brush inogona kushandiswa zvese kunyorova kana kuoma Inogona kushandiswa kwete chete sekugezesa bhurasho rekuchenesa mhuka dzinovaraidza, asi zvakare seyese yekushambadza yezvinangwa zviviri.
2.Made yemhando yepamusoro TPE zvinhu, zvakapfava, kukwirira kusimba uye zvisina-chepfu.With inofungisisa dhizaini, nyore kubata uye nyore kushandisa.
3.Soft mazino marefu anogona kuchenesa zvakadzama uye kutarisira ganda, inogona kubvisa bvudzi rakasununguka uye tsvina zvinyoro nyoro, ichiwedzera kutenderera kweropa uye inosiya jasi rako remhuka rakapfava uye richipenya.
4.Mazino akaenzana ari kumusoro anogona kukwiza-tema nekuchenesa kumeso kwemhuka dzinovaraidza, paws nezvimwewo.